हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि दिवंगत भएका अमेरिकी सैनिकलाई ‘वीरता पदक’बाट सम्मान - Janata Times
हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि दिवंगत भएका अमेरिकी सैनिकलाई ‘वीरता पदक’बाट सम्मान
काठमाडौं।विनासकारी भूकम्पको उद्धार कार्यको सिलसिलामा सिन्धुपाल्चोकमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि दिवंगत भएका अमेरिकी सैनिकहरुलाई उनीहरुको अतुलनिय योगदानको कदर स्वरुप नेपाल सरकारबाट दिइएको ‘वीरता पदक’ प्रदान गरेका छन् ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी सैनिक सहचारी प्रमुख सेनानी ग्रेगोरी डी पाइप्सलाई नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले हस्तान्तरण गरेका हु्न् । भूकम्पपछि उद्धारकार्यका बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि अमेरिकी सेनाका ६ जनासहित २ नेपाली सेनाका सैनिकहरुले वीरगति प्राप्त गरेका थिए ।
७ असार २०७४, बुधबार १७:०४मा प्रकाशित
आगलागीबाट विस्थापित परिवारको सहयोग : बहराइन समाजद्वारा खाद्यान्न सहयोग
कस्ले गरायो मध्यरातमा प्रहरीमा भ्यानमा वम विस्फोट ?
गृहद्धारा एकैपटक ३१ प्रजिअको सरुवा, केही महिना दिनमै पुन सरुवामा, को कहा पुगे त ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ७१ औं जन्मोत्सव भव्यरुपमा मनाउँने तयारी